Zvakaitika pa127th Canton Fair
Yakabatwa nedambudziko mamiriro, iyo 127th Canton Fair yakaitwa online uye yakapera zvakakwana. Mikana nematambudziko zvinogara muInternet Canton Fair, unova muyedzo kumakambani eChina epasirese ekutengesa uye vagadziri. Haorui boka rinoshingairira kutora chikamu ...
Ndeupi rudzi rwechigaro chimbuzi chaunosarudza?
MDF (Medium-Density Fiberboard) chigadzirwa chakagadzirwa chehuni chinodzvinyirira iyo fiber yehuni mubhodhi rakadzika pasi pekupisa kwakanyanya uye kumanikidza, ichibva yadimburwa kuita chimiro. Kunyangwe yakasarudzika-pendi pendi kana yakafukidzwa neyekushongedza patter ...
Bazi rezveMabhizimusi rePRC rakafunga kuti 127th Canton Fair ichaitwa online kubva munaJune 15 kusvika 24, 2020.
China Import and Export Fair ("Canton Fair" kana "The Fair"), iyo ichaitwa kubva munaJune 15 kusvika 24, irikukoka vanopfuura 400,000 vatengi vepasi rese kune yavo 127 uye yekutanga kuratidzwa pamhepo. Kubudikidza nepuratifomu mapuratifomu, Canton Fair ichaenderera mberi kusimudzira bhizinesi kutangazve uye o ...